Kobo Clara HD ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - စျေး၊ အသွင်အပြင်၊ ထင်မြင်ချက်များ | eReaders အားလုံး
Nacho Morató | | စာဖတ်သူများ, Kobo
Kobo သည်၎င်း၏ ereader အသစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည် Kobo Clara HD ကို။ ၎င်းသည်ယူအက်စ် ၁၂၉ အတွက် ၆ လက်မဖတ်ရှုနိုင်ပြီးထိတွေ့နိုင်သော၊ illuminated နှင့် ComfortLight နှင့်အတူ။ (သင်ကမှာဝယ်နိုင်သည် အမေဇုံ နှင့် Fnac) စျေးနှုန်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များအတွက်၎င်းသည် Kobo Glo HD အဟောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိရစေသည်။ Clara သည် Kindle Paperwhite နှင့်တိုက်ခိုက်ရန်လာသည်။
The Kobo Clara HD၊ အရည်အသွေးနှင့်ဈေးနှုန်းကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီတွင် Kobo Aura၊ Kobo Clara HD၊ Kobo Aura H4O နှင့်စာဖတ်သူ (၄) ဦး ရှိသည် Kobo Aura One။ Aura သည်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပြီး H2O သည် ၆ at ရှိ High-end နှင့် One high-end သည် ၇.၈ with ဖြင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် Clara သည် PaperWhite မှအလွန်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်တည်ရှိပြီး high-end ကဲ့သို့တူညီသောလက္ခဏာများရှိသော်လည်းပိုမိုဆန်းကြယ်သောဒီဇိုင်းနှင့်သာမာန်ပစ္စည်းများနှင့်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောပစ္စည်းများဖတ်ရှုသူများဖြစ်သည်။ ဒီနေ့ယူရို ၁၃၀ ဟာစျေးနှုန်းနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးဒီကနေဒီအကွာအဝေးကိုအတော်လေးခုန်နေပါတယ်။
4 Kobo, Pocket နဲ့ Bluetooth ဆော့ဗ်ဝဲ
6 screen ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု: HD / 300 dpi
အလင်းအိမ်။ TypeGenius ComfortLight Pro စနစ်
159,6 110 8,35 မီလီမီတာ
Wi-Fi ကို 802.11 ခ / g / n / Micro-USB ကို
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် - ရက်သတ္တပတ်များစွာ
အတွင်းပိုင်းကမှန်တယ်၊ နည်းနည်းလေးမှေးမှိန်သွားမယ်၊ ပိုပြီးအားကောင်းတဲ့တင်ဆက်မှုကိုငါမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်ပစ္စည်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသော်လည်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဂရုစိုက်ပြီး၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့ထံတင်ပြသည့်နည်းလမ်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အစ်ကိုဖြစ်သူ Kobo Aura One ၏ထုပ်ပိုးမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။
ဂန္တ ၀ င်အရွယ် 6″ နှင့်သမ္မာသတိ ရှိ၍ ကြည့်နိုင်သည်။ ကိုင်တွယ်ရန်နှင့်သယ်ယူရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ bezel သည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် Aura One တွင်ဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းသည် frames များနှင့်အတူတကွမျက်နှာပြင်ပြားမဟုတ်ပါ။
နောက်ဘက်ခြမ်းမှာကောင်းမွန်သောဆုပ်ကိုင်ထားမှုကြောင့် Aura One ၏ချုပ်ကိုင်မှုမဟုတ်ဘဲဖောက်ထားခြင်းခံရသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအရမ်းကောင်းသောစာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်
၎င်းတွင် mini USB ဘေးရှိ power ခလုပ်တစ်ခုတည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ကိရိယာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောခလုတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်စာမျက်နှာဖွင့်ခလုတ်များမပါ ၀ င ်၍ ၎င်းတွင် microSD slot တစ်ခုမပါရှိပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ 8Gb သိုလှောင်မှုဟာလုံလောက်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်သူတို့ကတိုတောင်းသောစဉ်းစားသူတွေကိုဖတ်ပါ။
Kobo, Pocket နဲ့ Bluetooth ဆော့ဗ်ဝဲ
Kobo၊ ၎င်း၏ operating system, menus များကိုစမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့်အရာအားလုံးသည်အလွန်ရိုးရှင်း။ ဖော်ရွေသည်၊ ခိုင်ခံ့ပြီးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသည့်အိတ်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Mozilla's Read it Later နှင့်ပါ ၀ င်သည်။ ထိုအရာက ၀ က်ဘ်ဆောင်းပါးများကိုတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်း မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ereader တွင်ဖတ်ရှုခွင့်ပေးသည်။
Bluetooth နဲ့ audiobooks တို့ပါ ၀ င်မယ်ဆိုတဲ့ကောလဟာလတွေရှိခဲ့ပေမယ့်ဒီရွေးချယ်မှုတွေကိုကျွန်တော်မတွေ့ရပါ။ အမှန်တရားကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မယ်။
Kobo သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ယခင်က Glo HD မှဖုံးအုပ်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်အလွန်ကောင်းသော ereader တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ယနေ့ငါရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးယူရို ၁၃၀ အထိမရရှိလျှင်အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
- ၎င်းတွင် SD ကဒ်အထိုင်မရှိပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Kobo Clara HD ကိုပြန်လည်သုံးသပ်
စာဖတ်သူများ၏အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်စတင်စဉ်းစားမိသည်။ အားလုံးမြင်တ ဦး တည်းမြင်။ ဖန်သားပြင်ကြီးများ (သို့မဟုတ် Oasis လိုဒီဇိုင်း) မတူသူများသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဖမ်းစားသည်။
သို့သော်ဤအကြားနှင့်ငါ Paperwhite အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားမှုအကြား။ ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်နှင့်ဗေဒအဆင့်တွင် ... ပင်လျော့နည်းရှိပါသည်။
မင်္ဂလာပါ Javi ဟုတ်တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းမရှိသလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူး။ Ereaders ဆိုတာအလွန်တိကျတဲ့အလုပ်၊ ဖတ်ဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ကိရိယာတွေဖြစ်တယ်၊ ငါသူတို့အရမ်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီထင်တယ်။
ကျွန်တော့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုကတော့ eink color display ကိုသုံးတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ဒါကလာလိမ့်မယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။
ဘာများထပ်မေး ဦး မလဲ။ သူတို့တစ်တွေတက်ဘလက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိရပါ။
ငါဆန့်ကျင်ဘက်အလွန်တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါဆိုလိုတာက E Ink ဖန်သားပြင်နောက်ခံ။ အရမ်းမှောင်နေဆဲ ထို့ကြောင့်အလင်းဖြာလိုက်ခြင်းသည်အဖြူရောင်ဖြစ်ပုံရသော်လည်း၎င်းကိုမသယ်ဆောင်သည့်ဖတ်ရှုသူများ (အထူးသဖြင့်ဖန်သားပြင်ကြီးများရှိသူများ) တွင်သင်သည်နောက်ခံကိုတွေ့ရပြီးအလွန်မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ E-Ink က၎င်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကအရေးကြီးသောနည်းပညာဆိုင်ရာပြproblemsနာများရှိနိုင်သည်။
အရောင်ဟာကျွန်မရဲ့ကြီးမားတဲ့အိပ်မက်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်ငါနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးစိတ်ပျက်စရာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ brigestone, Triton, Liquavista, Irx Innovations, etc … Clearink ၏နောက်ဆုံးကျည်ဆံသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အရောင်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကိုကျွန်ုပ်မယုံကြည်သော်လည်းဟေးသူတို့တိုးတက်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။ နောက်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်တွင် E Ink မှ ACEP ဖော်ပြချက်များလည်းရှိသည်။
ဖတ်သူများအတွက်ဆိုလာပြားထည့်ပါကစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။ ဤဖန်သားပြင်များအသုံးပြုသောစွမ်းအင်အနည်းငယ်ကြောင့်စာဖတ်သူများကိုမိမိကိုယ်ကိုလုံလောက်စွာလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါပြtheနာများကုန်ကျနှင့်ဖြစ်ကောင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဖင်လန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ သူဖတ်နေသူ Triton မျက်နှာပြင် (E Ink အရောင်) ရှိပုံနှင့်ဗီဒီယိုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခဲ့သည်။ https://www.youtube.com/watch?v=UbyCkJ3f4UI
ကောင်းပြီ, တိုးတက်မှုရှင်းပါတယ် ... ဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်ရန်အနည်းငယ်သာရှိလျှင်, software ကိုအတွက်တီထွင်။
အရွယ်အစားတူ ၆″ ထက်ပိုလိုပြီး၎င်းသည် Kindle ဖြစ်ရန်လိုသည်
ငါ kobo ကိုကြိုက်ပေမယ့် Amazon ကနေတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေပြီး Caliber ဆီကနေအီးမေးလ်နဲ့ပို့လိုက်တာငါကြိုက်တယ်။
ဆော့ (ဖ်) ဝဲထဲမှာ၊ ကျွန်တော်တွေ့ရတာကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ Android ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ပျက်တာကငါထင်တာကတော့ဒါဟာယင်ကောင်တွေကိုသေနတ်တွေနဲ့ပစ်တာနဲ့သတ်တာနဲ့တူတယ်။ ရက်ချိန်းတစ်ခုမျှဝေရန်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို Install လုပ်ပါ။ တွစ်တာလား
စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့၎င်းကိုနောက်မှဖတ်ရန်သို့မဟုတ်အလားတူအလုပ်လုပ်ရန်၊ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုအိတ်ကပ်ထားရန်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်စာဖတ်သူမှာလုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသင့်တာကိုကျွန်တော်မမြင်နိုင်ခဲ့ပါ။ hardware နဲ့ software နှစ်ခုစလုံးကိုသူတို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေမယ့်အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမတွေ့ရပါ။
Nacho ကသင့်ကို“ သီးသန့်” ပေးသည်။ Amazon.com စာမျက်နှာမှ Kindle Voyage ပျောက်ကွယ်သွားသည်
ခဏဖြစ်မယ်ဆိုတာငါမသိပေမယ့်ငါသံသယဝင်တယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်စတော့ရှယ်ယာမရှိခြင်းဖြစ်ပါက၎င်းသည် ဆက်လက်၍ ပေါ်လာပြီးမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို ၂ ပတ်မှ ၂ ပတ်အတွင်းရနိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းနဲ့တူအနံ့။
အမှန်တရားကတော့အဲဒါကိုအတည်ပြုမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုဘာမှအံ့အားသင့်စရာမရှိပါဘူး။ ငါ Voyage ၏အသွင်အပြင်ပြီးနောက်ဒီ kindle နှင့်နည်းနည်းသဘောမျိုးလုပ်ဘယ်တော့မှမ။
Tangus နှင့်ပြtoနာအချို့ပြီးနောက်သင်သိသည့်အတိုင်း Kobo Clara ကိုဝယ်ရန်သင့်မှတ်ချက်များသည်ကောင်းသည်ဟုထင်သည်။ ယူရို ၁၃၀ ။
ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခု ... ဆော့ဖ်ဝဲအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ စာမျက်နှာ ၃ မျက်နှာတစ်တန်းဖတ်ဖို့သုံးကြိမ်ပိတ်ထားရတယ်၊ ထိမိတဲ့အခါမျက်နှာပြင်ရဲ့အထိခိုက်မခံတဲ့နေရာတွေမတုံ့ပြန်ဘူး။ ကိစ္စမရှိပါဘူး စာမျက်နှာ ၈၀၀ ဝတ္ထုများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ရသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသည့်အခါတိုင်းစာမျက်နှာ ၂၂၁ သို့သွားပြီးရှေ့သို့ရွေ့ရန်လမ်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ crappy software? ရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းပစ္စယ?
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျားပြောတာဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်၊ ပြန်လည်အစားထိုးရန်စသည့် kobo အထောက်အပံ့ကိုသင်ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသလား။
မင်္ဂလာပါကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်အား Kobo Clara hd ပေးထားပြီးကျွန်ုပ်အားလုံးကြိုက်သည်။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး eBook ပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ ၎င်းသည်အလွန်နှေးကွေးသည်၊ ကျွန်ုပ်စာမျက်နှာကိုဖွင့်သောအခါသို့မဟုတ်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမျိုးမဆိုပြုလုပ်ရန် Kobo သည်ရာစုနှစ်တစ်ခုကြာသည်။ ကျွန်ုပ်မသိသောအချက်မှာ၎င်းသည် eBook တစ်ခုတွင်သာမန်အရာတစ်ခုဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အားချွတ်ယွင်းသောကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါကဖြစ်သည်။
francisco valera bengoechea ဟုသူကပြောသည်
သင်ပိုင်ဆိုင်သောစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ရှုရန်ဥပမာအားဖြင့် Don Quixote သည် Adobe မှထုတ်ပေးသော ADE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန်လိုအပ်သည်ကိုမည်သည့်လေ့လာမှုမှမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့် Adobe သည်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သူ့ဟာသူ install လုပ်ပြီး၎င်းကိုဖတ်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ တကယ်လား ငါထင်တာကငါပြန်လာပြီ။ နှင့်စကားမစပ်, သော့ခတ်လှည့်ပတ်ရဖို့တစ်လမ်းလည်းမရှိ
နိဂုံးချုပ် - အကယ်လို့မင်းက Amazon ကိုကျွန်မခံချင်ဘူးဆိုရင် Kobo ကိုဝယ်ပြီးမင်းကတခြားလူတွေပါ။
francisco valera bengoechea အားစာပြန်ပါ
Hello Francisco၊ DRM ပြissueနာသည်စာဖတ်သူအတွက်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုထည့်ထားသော Hardware မဟုတ်ဘဲ ebook များ၊ စာအုပ်များကို layout နှင့်ရောင်းသူများဖြစ်သည်။
ကာကွယ်မှုကိုမလိုအပ်ပါ။ Don Quixote လိုစာအုပ်တွေမှာ DRM-free online edition များစွာရှိသည်။
ဟယ်လို။ ကောင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေမယ့်သင်ကဖြေရှင်းနိုင်မနိုင်သိရန်ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ စာမျက်နှာကိုဖွင့်ခြင်းသည်မျက်နှာပြင်၏အစွန်းတွင်ရှိရမည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အလယ်၌ပြုလုပ်ပါကဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ရရှိသောစာကြောင်းသည်စာကြောင်းများကိုမျဉ်းကြောင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ ဖြစ်ပါက၎င်းကိုပိတ်ထားနိုင်ပါသလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်အတွက်စာမျက်နှာကိုမျက်နှာပြင်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုဖွင့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆိုနီအတွက်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီး၎င်းသည်အတော်လေးလက်တွေ့ကျပါသည်။
ငါ ၀ ယ်လိုက်ပြီးလိုင်းအကွာအဝေးကိုပြောင်းလဲဖို့မထောက်ပံ့ဘူး။ ငါသူတို့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စကားပြောသောအခါသူတို့ကသူတို့၏စင်မြင့်ပေါ်တွင်သူတို့ဝယ်သောစာအုပ်များကိုသာအာမခံကြောင်းပြောကြသည်။
ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖတ်ရှုနိုင်သည့်စာဖတ်သူဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလများစွာတွင်စာအုပ်အမြောက်အမြား ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကငါ့စာအုပ်တွေက epub လို့ပြောပြီး epub3format သုံးတယ်တဲ့။
သို့သော်သူ၏ကြော်ငြာကသူ epub ဖတ်တယ်ဟုဆိုသည်။ သင်၏အဖြေမှာလိုင်းအကွာအဝေးကိုမပြောင်းနိုင်ခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။ ငါအစမှအမျက်ဒေါသနှင့်အတူစတင်
သူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းကိုဘာအာမခံပေးနိုင်လဲဆိုတာငါသာမန်မြင်သည် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲကသင်ထွက်လာတဲ့အရာတွေကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးချထားတာလားဆိုတာမသိဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းမှာပြproblemနာဖြစ်လို့ပါ။
ငါ Clara နှင့်အတူပုံမှန် epub ဖတ်ပါနှင့်မည်သည့်ပြproblemနာကိုရှာမတွေ့ပါ။
ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရ Kobo ကိုမဝယ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ သူတို့မှာနည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုမရှိကြပါဘူး။ နှစ်နှစ်အကြာမှာအဖြေကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒီနည်းကသင့်အတွက်ဘာမဆိုဖြေရှင်းပေးဖို့ပါ။ ငါဒီအချက်အလက်ရှိသည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ မိုင်းကိုယူရို ၂၀၀ နီးပါးနှင့်ပစ်ချရန် ... အဆိုးဆုံးကတော့၎င်းသည်အားသွင်းပလပ်ဖြစ်သည်ဟုထင်သည် ... ရီစရာဖြစ်သော်လည်းအာမခံချက်ပြီးနောက်အရေးမကြီးပါ
၎င်းသည်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ပျက်စေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံး eBook ဖြစ်သည်။
* ဒီ software ကအရမ်းနှေးတယ်။
* မိုဘိုင်းနှင့်ကွန်ပျူတာအက်ပလီကေးရှင်းများသည်ကိရိယာနှင့်စနစ်တကျစည်းညှိခြင်းမရှိပါ။ သင်၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ၀ ယ်ထားသောစာအုပ်များကိုသာတွေ့ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်စာဖတ်ခြင်းကိုရှေ့သို့တိုးပါက၎င်းသည်စက်ပေါ်တွင်မပေါ်ပါ။
* ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုမတွေ့ရှိပါ။ ငါထပ်ခါထပ်ခါပြန်ဖွင့်သော်လည်းတူညီနေဆဲ ငါကသူတို့ငါ့ကိုငါ့အားအဆိုပြုထားသောဖြေရှင်းချက်ကြည့်ရှုရန်စတိုးဆိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။